Forum 352456 - Madagascar-Tribune.com
« Azo hametrahana fanantenana sy hitondra fahombiazana ho an’ny mpiara-belona ve ny fifidianana kinasa hotanterahana eto amin’ny Firenena ? »
Amiko dia ampy izay ary tokony hajanona amin’izay ny rafi-pisainana milaza hoe « ny prograna sy ny dinampiarahamonina hoentin’ny mpilatsaka hofidiana » no tokony hitarafana sy hametrahana ny safidy.
Olona amin’izay jerena sy topazamaso ; tilio tsara ary diniho raha olombanona sy mendrika, olona manana tandrohasina azo antoka, olona mahafantatra tsara ny fahoriana sy ny vesatry ny tebiteby isampianakaviana, olona nobeazina sy voavolavola tao anatin’ny kolontsaina sy hasimpiarahamonina mifandrindra amin’ny fametrahankasina ny mahasarobidy ny « aina sy ny fanahy ». Io olona io tiliana sy zohina ary omeo tantsoroka.
« Tsy ny hosoran-tsakay no mangidy hoditra, ary tsy ny hosoran-tantely no mamy hoditra, fa ny atao no mahasoa sy maharatsy »